Bush iyo Brail oo Dhambaal TV ah u Diray Reer Ciraaq
DAAWO BUSH iyo BLAIR DHAMBAALKII AY U DIREEN CIRAAQ
Daawo Kofi Annan oo Ka Hadlaya Arimaha Ciraaq
Halkan Dhegeyso warkaan
Magaalada kutaal woqooyiga Ciraaq ee Mosul ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Maraykanka iyo Kurdish-ku ay bilaabeen in ay galaan ayadoo aysan muuqan wax iska caabin ah oo kaga imanaya Ciraaq. Mosul waxay ka mid tahay magaalooyinka aadka hawada looga duqeeyey.
Warar ay werisey warbaahinta Australia ayaa sheegay in Ciidanka Maraykanku ay sheegeen in guutadii 5aad ee Ciidanka Ciraaq ee ku sugnayd magaalada Mosul ay is-dhiibeen. Dhanka kale waxaa warku sheegay in magaalada kale ee kutaal woqooyiga Ciraaq ee Tikrit lagala kulmay cadaadis u dhigma kii Baqdaad lagala kulmay.
VIDEO: Daawo Kofi Annan oo Ka Hadlaya Arimaha Ciraaq
Sida uu weriyey CBC TV , Qaramada midoobey waxa ay sheegtay in Maraykanku uu jebinayo xeerka caalamiga ah ee loo yaqaan xeerka Geneva [Geneva Conventions] maadaama uu Maraykanku ku guul daraystay in uu joojiyo kuwa wax bililiqaysanaya ee qaatay qalabkii Cisbitaalada. Qaramada Midoobey waxay Baqdaad ku tilmaameen meel aan wax qawaaniin iyo kala dambayn kajirin taas oo ay yiraahdeen xeerka Geneva wuxuu qabaa in xoogaga halkaas haystaa ay sugaan ammaanka.
Magaalada Baqdaad ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada maraykanka ee halkaas ku sugan ay kusoo roagayaan bandow ka bilaabmaya qorax dhaca ilaa qorax soo baxa si loo xakameeyo bililiqada faraha ka baxday.
2 Carruur ah oo lagu diley meel kontorool ah ah
Waxaa wararka ka imanaya magaalada Nasiriyah ayaa sheegaya in maraykanku ay meel kontorool ah ay ku dileen laba carruur ah kaddib markii dareewalkii gaari noociisu yahay Minivan uu istaagi waayey. Waxaana la sheegay in sagaal qof oo kale ay isla gaarigaas ku dhaawacmeen.
Sida ay werisey wakaaladda wararka u faafisa ruushka ee loo yaqaan interfax, safiirka ciraaq u fadhiyey dalka Ruushka oo magaciisa la yiraahdo Cabbaas Khalaf ayaa ku dhawaaqay in uu hawshiisa kasii wadi doono Moscow. "Waxaan metelayaa Ciraaq iyo dadkeeda, waana sii wadayaa hawsha aan u xilsaaraa ilaa xukuumad sharci ah laga dhisayo Ciraaq. Waa in ay ahaataa dawlad ay soo doorteen dadka Ciraaq isla mar ahaantaana ay qaramada midoobey aqoonsantahay" ayuu yiri Cabbaas Khalaf. Waxana uu Cabbaas beeniyey warar sheegayey in uu magangelyo weydiisanayo Ruushka. Waxana uu ku daray in safaarada Ruushka ee Baqdaad ay sideedii u shaqayn doonto.
Guriga Saddam walaalkiis oo la duqeeyey
Warar kale ee maanta ee Ciraaq waxaa ka mid ah in Maraykanku duqeeyey guriga Barzan Ibrahim Hasan al-Tikriti oo ay Saddam walaalo yihiin oo kuyaal magaalada Ramadi oo qiyaastii 100 km galbeed kaga aadan Baqdaad. Waxaa warku ku daray in gurigaas lala beegsaday lix gantaal. Waxaa Barzan lagu sheegay in uu xukuumada saddam ku gacanqabtay sidii lacago gaaraya malaayiin uu dalka dibada loog asaari lahaa.
Daawo Bililqada Ciraq oo Xad-dhaaf noqotay
Sida ay werisey IOL , Qusay oo ah wiil uu dhalay Saddam ayaa waxaa lagu arkay Baqdaad, gaar ahaan degmada Al-A'azamia. Waxaa warku intaas ku daray in Adel Mourad oo xubin ka ah xisbiga Kurdishka ee loo yaqaan PUK uu IOL u sheegay in Khamiistii la arkay Qusay oo gaari nooca biikaabka [pickup] ah oo midabkiisu yahay madow uu ku dhexwtey Baqdaad. Isla Khamiistii waxaa lagu soo waramay in guryaha Qusay iyo Uday [labada wiil ee saddam] oo kuyaal dhanka baqdaad ay Maraykanku ka joogaan in la bililiqaystay. Waxa kale oo IOL sheegtay in ilo kale ay arbacadii u sheegeen in Saddam iyo labadiisa wiil ay aadeen magaalada Tikrit oo ah meeshii uu Saddam kusoo barbaaray. Qusay waxaa lagu soo waramay in uu yahay kan korka ka eega ciidanka loo yaqaan ilaalada Qaranka.
Maraykanka oo cadaadis Suuriya kusaaraya in ay Xiraan Xadka Ciraaq
War ay werisey IOL ayaa sheegay in Maraykanku uu cadaadis ku saarayo Suuriya in ay xirto xadka ay la leedahay Ciraaq. Waxaa warku intaas ku daray in qaar kamid ah sharci-dejiyayasha Maraykanku laga yaabo in ay soo jeediyaan in lasoo bandhigo xeer dhan ka ah suuriya, xeerkaas oo ah in Suuriya ay mas'uul ka tahay cawaaqibka tageeradeeda argagixisada iyo siiwadideeda hubka nuclear-ka, biological-ka iyo chemical-ka.
VIDEO: DAAWO BUSH iyo BLAIR DHAMBAALKII AY U DIREEN CIRAAQ
Madaxweynaha Maraykanka, Bush, iyo Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska, Blair, ayaa khamiistii khudban horay loo duubay u diray dadka reer Ciraaq taas oo ah Video ayadoo la adeegsanayo khadkii uu ka hadlijirey TV-ga Ciraaq, Video-ga oo laga lalinayey diyaarad dul mareysey Ciraaq. War ay qortay IOL ayaa sheegay in dhambaalkaasi uusan gaarin reer Ciraaq sababtoo ah ayuu warku yiri Koronto dalkaasi malahan lagu daawado TV.
Abdul Majid al-Khoei [IOL]
Hogaamiye shiicada ee maraykanka raacsanaa oo magaciisa la oran jirey Abdul Majid al-Khoei ayaa Khamiistii lagu diley magaalada An-Najaf oo ah magaalo ay shiicadu qadariyaan.
Dad caraysan oo mindiyo wata ayaa galay masjidka Imam Cali ookuyaal Najaf, kadibna halkaas waxay ku dileen Abdul Majid al-Khoei oo dhowaan dalka Ciraaq kusoo laabtay. al-Khoei waxaa aabe u ahaa Ayatollah al-Khoei oo ahaa hogaamiyihii shiicada waqtigii dagaalka Khaliijka 1991 kaas oo dhintay asagoo kujira xabsi guri. Dilkii Abdul Majid al-Khoei waxaa Cambaareeyey Maraykanka iyo Ingiriiska.
TAALOOYINKII SADDAM OO LASOO RIDEY: GUJI HALKAN